नेपालमा खोप लैजाने पहल भइरहेको छ : राजदूत डा खतिवडा - kaligandaki Khabar
१०, जेठ २०७८
वासिङ्टन, १० जेठ ।अमेरिकी सरकारले नेपाललाई कोरोना भाइरससँग जुध्नका लागि विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । विदेश मन्त्री एन्थोनी व्लिकेनले हालसालै नेपाललाई सहयोग गरिएको विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी सरकारलाई नेपालको आवश्यकताअनुसारका सामाग्रीहरु, खोपलगायतको माग गर्ने कार्यमा अमेरिकी सरकारी एजेन्सीहरुसँग छलफल गर्न व्यस्त रहनुभएका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. युवराज खतिवडासँग अमेरिकाको वाशिङ्गटन डिसीस्थित राससका विशेष प्रतिनिधि मधुकर अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश तल प्रस्तुत छ ।
हामीहरुले नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोधमा अमेरिकाको हेल्थ एण्ड ह्युमन रिसोस् सर्भिस्लाई हालै एउटा अनुरोध गरिएको छ । त्यसमा हामीले बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप खरीद गर्न चाहन्छौं भनेका छौँ । अहिले खोप खरिद गर्नको लागि अमेरिकी सरकारले स्वीकृत दिनुुपर्ने हुन्छ । त्यो विषय मैले स्टेट् डिपार्टमेन्ट्स्मा उठाएको छु ।
तपाईलाई थाहा नै छ, एक चरणको सामाग्री युएसएआइडीमार्फत् नेपाल पुगिसकेको छ । त्यो आगामी दिनमा पनि जाँदैछ । अमेरिकाले हरेक साता जस्तो त्यस्ता सामाग्री नेपालमा पठाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यसैगरी अर्को डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सबाट पनि नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षाका सामानहरु धेरै गएका छन् । साथै हामीहरुले अनुरोध गरेको खण्डमा स्पेशल चार्टड विमान पनि नेपाल जानसक्ने भनेर हामीलाई स्टेट एजेन्सीबाट पनि जानकारी आएको छ ।
यसका लागि गैरआवासीय संघदेखि डाक्टर एशोसियसन, नर्सिङ एसोसियसन स्थानीय संघसंस्थाहरुमार्फत् सहकार्य गरेर यहाँ सङ्कलन गरिएका सामाग्रीहरु नेपाल लैजान हामी आतुर छौँ । हामी अहिले महामारीको चपेटामा परेकोले एक सेकेण्ड पनि बिलम्व नगरी अमेरिकाबाट स्वास्थ्य सामाग्रीहरुदेखि खोप सम्म लैजान दूतावासले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न कुनै कसर वाँकी राखेको छैन ।
अमेरिकी सरकारले गरेको ऐतिहासिक सहयोग एमसीसीको कार्यान्वयनमा किन ढिलाई भएको हो रु त्यस विषयमा यहाँ केही छलफल भएको छ ?
प्रकाशित मिति :जेठ १०, २०७८ सोमबार - १३:३९:५४ बजे
जेलबाहिर आफन्तहरुको भीड
अन्तर्वार्ता– निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा समस्या देखियोः कटुवाल
अन्तर्वार्ता, प्रदेशका काममध्ये वाग्मती अगाडि छ: आन्तरिक मामिलामन्त्री पाण्डे
स्थानीय तह अन्तर्वार्ता, न्यायिक समितिमा आएका मुद्दा सहमतिमै टुङ्ग्याएका छौँ : उपाध्यक्ष गुरुङ